Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment माता सरस्वतीलाई खुशी पार्न चाहानुहुन्छ ? यसरी गर्नुस पूजा आराधना - Pnpkhabar.com
माता सरस्वतीलाई खुशी पार्न चाहानुहुन्छ ? यसरी गर्नुस पूजा आराधना
काठमाडौं : आज बसन्त पञ्चमी पर्व हो। ज्ञानको देवी, देवी सरस्वतीको पर्व धूमधामका साथ मनाइन्छ। बसन्त पंचमी माघ महिनाको शुक्लपक्षको पञ्चमीमा हरेक वर्ष मनाइन्छ।
यस दिन पहेंलो कपडा लगाउने